Ernesto Valverde oo sheegay in Fernando Torres uu la mid yahay Andres Iniesta – Gool FM
(Barcelona) 19 Maajo 2018. Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa amaanay weeraryahanka halyeeyga ah Fernando Torres oo bari Axad ah ciyaari doono kulankiisa ugu dambeeya ee kooxda Atletico Madrid, isagoo xusuusiyay inuu soo maray waqtiyo fiican intii uu kubada cagta ciyaarayay.
Ernesto Valverde ayaa arintan kaga hadlay shir jaraa’id uu kaga soo muuqday saxaafada kahor kulanka Real Sociedad ay kula ciyaari doonaan garoonka Cump Nou kulankoodii ugu dambeeyay xili ciyaareedkan ee horyaalka La Liga dalka Spain.
“Torres waa ciyaaryahan kale ee ka mid ah jiilkii dhashay sanadii 1984, sida Andres Iniesta”.
“Fernando Torres wuxuu u dhaqaaqay horyaalka Premier League, waana ciyaaryahan heer sarre ah, waa mid ka mid ah ciyaartoyda lala xiriiriyo kooxo gaar ah oo qaab ciyaareed gaar ah leh, sida Iniesta, Torres ayaa sidoo kale calaamd noxon kara, waxaan u rajeeneynaa guul”.
DAAWO SAWIRRO: Sida ay Chelsea ugu dabaal degtay koobka FA CUP